Services Samakhusi, Kathmandu, Central Development Region, Nepal
नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको बेरोजगारीलाई ? मध्यनजर गर्दै के तपाईं “Online Job Portal Website / Mobile App” ? बनाउन चाहनुहुन्छ । यदि हो भने हामी सँग मिलेर “Online Job Portal” ?को व्यवसाय सुरु गर्नुहोस् र महिनामा ??५० हजार भन्दा धेरै पैसा ग्यारेन्टि कमाउनुहोस् ???। तपाईं हामीसँग वेबसाईट गराउनुहोस्, तपाईँको ?कमाई गराउने जिम्मा हाम्रो हो । अब तपाईं, हामी सबै मिलेर ?नेपाललाई बेरोजगारीमुक्त ? मुलुक गराउनुपर्छ । त्यसको लागि तपाईँले पहिलो कदम चाल्न अाज होईन अहिल्यै हामीलाई ? ९८१४५८१२४८ मा फोन गर्नुहोस् ।
???तपाईँको कमाई कसरी हुन्छ त ?
= मानौ एउटा कुनै ?कम्पनिलाई ?कर्मचारी चाहिएको छ । अब त्यो कुरा ?पत्रिकामा छाप्ने हो भने हजारौँ रुपैँया ? त्यो पत्रिकाले लिन्छ । यदि त्यो काम तपाईँले गर्नु भयो भने त्यो पत्रिकाले पाउने हजारौँ रुपैयाँ ? तपाईंले पाउन सक्नुहुन्छ । जस्तो, यदि एउटा कुनै कम्पनिले ? कर्मचारी ? चाहियो भनेर त्यसको विवरण तपाईंको वेबसाईटमा ? राख्छ र त्यो जागिरको लागि योग्य व्यक्तिले निज कम्पनिलाई ?सम्पर्क गरेर काम गर्नसक्छ । यसरी तपाईँले एउटा कम्पनि सँग ? २ देखि ५ सय सम्म लिन सक्नुहुनेछ । यदि तपाईंको ? वेबसाईटमा १ महिनामा जम्मा ५० वटा मात्र जागिर पोस्ट भयो भने नि तपाईँको १ महिनामा २५,००० ? कमाई हुन्छ । कम्पनिलाई कर्मचारी मिल्यो, बेरोजगार लाई जागिर पनि मिल्यो र साथमा तपाईँको पनि राम्रो कमाई भयो । ???
यो त जम्मा एउटा मात्र तरिका हो । यस्तो धेरै तरिकाहरु हामी सँग छ । ???त्यसैले यस्तो राम्रो कुरा बुझ्न ढिला नगर्नुहोस् । अहिल्यै ?९८१४५८१२४८ मा फोन गरिहाल्नुहोस् ।
नि-शुल्क डेमोको लागि : ? http://bit.ly/2oaQu33 मा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ ।
✅ प्रोजेक्ट नाम : Online Job Portal Website / Mobile App
✅ मुल्य : रु.१४,९९९ ।-
✅ रिन्यु चार्ज : वार्षिक रु ५,००० ? मात्र
Samakhusi, Kathmandu, Nepal Samakhusi, Kathmandu 44600, Nepal
Buy Reseller Hosting in Nepal - AGM Web Hosting
Buy Hosting with Special Discount - AGM Web Hosting